ကြွေးတင်ဘုရင်ဆပ် credit card | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ကြွေးတင်ဘုရင်ဆပ် credit card
ကြွေးတင်ဘုရင်ဆပ် credit card
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Oct 7, 2013 in Community & Society, Money & Finance | 10 comments
မြန်တျန့်ပြည်ဂျီးမှာ အကြွေးဝယ်ခွင့် ခရက်ဒစ်ကတ် ခေတ်စားလာဒေါ့မှာမို့ ဒီနေ့ အီးဟောင်းဒေါ့ကွန်းမှာ တင်ထားတဲ့ “သေသူ ခရက်ဒစ်ကတ်အကြွေး မည်သူပေး” သဟုတုဗဖြစ်ဖွယ်စာကို စေတနှာနဲ့ ဘာသာပြန် ဝေငှ လိုက်ပါဒယ်။
မိမိ ခြစ်ခင်ကြင်နာသူကို ဆုံးရှုံးရလို့ ဝမ်းနည်းကြေကွဲ ဖြစ်တုံးမှာ တပူပေါ် နှစ်ပူဆင့် ကျန်ရစ်သူများ အနေနဲ့ နောက်ထပ် ဆိတ်မကောင်း ဖြစ်စရာ ကြုံရတာ ပြပါဆို အကြွေးလာတောင်းသူ ဖြစ်ပါတယ်။ (debt collector ခေါ်သဗျ.. ဒင်းရို့ကလည်း သူ့ပညာနဲ့သူ… ဖုံးတဂွမ်ဂွမ်ဆက် စာတဂျီဂျီပို့ပေါ့ဗျာ။ အကြွေးမဆပ်ဘဲ လစ်ပြေး သွားရင်တော့ သူ့ဆိုရှယ်နံပါတ်နဲ့ ရေမြေအဆုံး လိုက်ပေဒေါ့၊ ကမ္ဘာမကြေစဒမ်း..။ ဖုံးဆက်ရင် လေသံအမျိုးမျိုး တဖက်သား အခြေအနေကြည့် ပြောရတယ်။ ချော့သင့်တန်ချော့ ခြောက်သင့်တန်ခြောက်၊ ရသလောက် နှိုက်ယူဂျပါဒယ်။ ဟိုကလည်း မပေးချင်လို့ ရှောင်ပါတယ်ဆိုမှ ဂတိအမျိုးမျိုး လှည့်ပတ်ပေးဒေါ့တာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ တဂွေ့မှာ ချက်ကောင်းမိရင် ပြန်ရတတ်တယ်။ ဒေဝါလီခံသွားတာမျိုး၊ အပြီးထွက်ပြေးသွားတာမျိုး ဆိုရင်တော့ မရဘူးပေါ့။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခွင်ထဲ ဆက်ရှိနေအုံးမယ်၊ လူတောတိုးအုံးမယ်ဆိုရင်တော့ တချိန်မဟုတ်တချိန် မိမှာပါဗဲ။ အဲဒကြမှ တိုးရင်းပေါင်း ဆော်ဗေဒေါ့။) ကျန်ရစ်သူမှာ တာဝန်ရှိကြောင်း အကြွေးကောက်ခံသူတွေ ဆိုဒက်ကျဗေမဲ့ မဟုတ်တာ အများဂျီးရှိဒယ်။ သဘောဂ အကြွေးရှင်သည် သေသူ ပိုင်ဆိုင်မှု ဥစ္စာတွေကိုဒေါ့ တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိ၏။
ခရက်ဒစ်ကတ် (အကြွေးဝယ်ကတ်) ဆိုဒါ ဒဂယ်ဒေါ့ ချေးငွေတခုပါဗဲ။ သုံးလိုက်တိုင်း ခရက်ဒစ်ကတ် ကုမ္မဏီက ကတ်အသုံးပြုသူကိုယ်စား ဆိုင်ကို ပိုက်ဆံပေးချေဒယ်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ကတ်ပိုင်ရှင်ထံ ငွေတောင်းခံလွှာ (သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း မဆပ်လျင် အတိုးတက်၏၊ စဂါးချပ်) ပေးပို့ပါသည်။
ကတ်ပိုင်ရှင် သေသွားပြီ ဆိုလျင်ဒေါ့ (ကတ်ကို သေသူနာမည်နဲ့ ထုတ်ပေးထားတာမို့၊ စဂါးချပ်။) သေသူမှာပဲ ကုမ္မဏီကို ပြန်ဆပ်ရန် တာဝန်ရှိဒယ်။ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုအနေနဲ့ သူတို့မလျောက်ခဲ့တဲ့ ခရက်ဒစ်ကတ် သုံးငွေအတွက် တာဝန်ခံစရာ မလိုဒေါ့ဗာ။
သေသူနဲ့ ကျန်ရစ်သူ ခင်ပွန်းတို့ ခရက်ဒစ်ကတ် ပူးတွဲလျောက်ခဲ့ရင်ဒေါ့ ကျန်သူမှာ ပြန်ဆပ်ဖို့ တာဝန်ရှိသည်။ သို့ဗေသိ ပူးတွဲကတ်ပိုင်ရှင်နဲ့ သေသူ ခရက်ဒစ်ကတ်မှာ အသုံးပြုခွင့် ပေးထားသူ သွားမရောနဲ့။ အကြွေးကတ် လျောက်ထားစဉ် ကျန်ရစ်သူ ဇနီးခင်ပွန်း ပတ်သက်ခဲ့ခြင်း မရှိလို့ သတ်မှတ်ထားဒယ်။ ငွေချေးသူနဲ့ သေသူ ကတ်ပိုင်ရှင် နှစ်ဦးအကြားသာ စာချုပ်သက်ရောက်ပြီး ကျန်ရစ်သူခင်ပွန်းကို သေသူ ကတ်ပိုင်ရှင်ဂ သူ့မှာရှိဒဲ့ အကြွေးဝယ်ယူနိင်စွမ်း ပမာဏ ခွဲဝေပေးထားတယ်လို့ ရိုးရိုးလေး ယူဆရမည်။ (ကတ်ပိုင်ရှင် အသက်အရွယ် ကြီးရင့်လာရင် ခွင့်ပြုထားတဲ့ ငွေပမာဏကို လျှော့မှာပေါ့ဗျာ၊ စဂါးချပ်။)
ကွယ်လွန်သူ ပိုင်ဆိုင်မှု ရှင်းဒန်း
သေပြီဆိုလျင် အမည်ပေါက် ပိုင်ဆိုင်မှုများဂို ဥပဒေဂျောင်း ထိန်းချုပ်မှုအောက် ယာယီ လွှဲပြောင်းလိုက်သည်။ ထို့နောက် အကြွေးရှင်များမှ သေသူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ခွဲဝေရယူရန် ရုံးဒေါ်သို့ လျောက်ထားရသည်။
ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် ဥပဒေများဒွင် အဦးဆုံး ရယူမည့် အကြွေးရှင် အမျိုးအစား သတ်မှတ်ချက် ထားရှိပေးသည်။ သာမန်အားဖြင့် အသုဘစားရိတ်၊ အရင်ပေးပြီးနောက် မသေခင် နောက်ဆုံးကုန်ကျသော ဆေးကုသစားရိတ်၊ ဥပဒေအကျိုးဆောင်ခ၊ သေဆုံးခွန်တို့ အစဉ်လိုက်သည်။ ထို့နောက်တွင်မှ ခရက်ဒစ်ကတ် လက်ကျန်ငွေလို စပေါ်မဲ့ အကြွေးများ ကြွင်းကျန်သော ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်တွင် တောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (စပေါ်မလိုတဲ့ ကတ်ကို unsecured card၊ စပေါ်အရင်ပေးရတဲ့ကတ်ကို secured card ခေါ်တယ်။ ခရက်ဒစ် အထောက်ထား မရှိတဲ့ လူသစ်များဆို စပေါ်ပေးမှ ရတတ်တယ်။ ကျနော် ရောက်ခါစ ကတ် လျောက်တော့ secured ဆို လုံခြုံတယ်၊ ကိုယ့်အတွက် အာမခံရှိတယ်မှတ်ပြီး လျောက်လိုက်တာ လာလိုက်တဲ့ ကြော်ငြာဒွေ၊ လာမှာပေါ့ စပေါ်ပေးမှဒေါ့ လူသစ်သစ် မသစ်သစ် ဘာအရေးလဲ။ သိပ်များများ မဟုတ်ပါဘူး.. ဒေါ်လာ သုံးလေးငါးရာ စပေါ်တင်ရတယ်။ သုံးတဲ့အခါ အဲဒီစပေါ်ထဲက ခုနှိမ်ပေးတယ်။ သုံးသလောက် ပြန်ဖြည့်သွား၊ ခြောက်လလောက်ကြာရင် စပေါ် မလိုတဲ့ အဆင့်ကို အော်တိုပြောင်းပေးတယ်။ မပြောင်းလဲ ဖုံးဆက်ပြောပေါ့ဗျာ။ အစလဒွေမှာ ဒက်ဗစ်ကတ် ဘဏ်အေတီအမ်ကတ် သဘောဖြစ်ပါဒယ်။ ခရက်ဒစ်ကတ် တခုရသွားရင် နောက်တခုရဖို့ လွယ်သွားပါပြီ။ တခုရှိတာ ကတ်လျောက်တာ အငြင်းပယ် ခံရလျင် မှတ်တမ်းဝင်သွားလို့ ကိုယ့် ခရက်ဒစ်ကတ် ရာဇဝင်မှာ အနှောင့်အယှက် ဖြစ်တတ်တယ်။ မသေချာရင် မလျောက်တာ အကောင်းဆုံးဗဲ။ ခြင်တောင် မပိုင်ဘဲ ရိုက်လျင် လက်နာသေးဒါပဲဗျာ၊ စဂါးချပ်။) အဲသလို ခွဲဝေလှီးရိတ်ပြီးလို့မှ ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုး ကျန်နေသေးရင် အမွေစားအမွေခံ ဆက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသူများ သေတမ်းစာအရ ခွဲဝေပေးနိုင်သည်။
ခရက်ဒစ်ကတ် အကြွေးဆပ်ရန် သေသူပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုး မလောက်ငှပါဂ ကြွင်းကျန်ပမာဏ ပေးစရာ မလိုဂျေ။ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုအား ခရက်ဒစ်ကတ် ကုမ္မဏီအနေဖြင့် တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့် မရှိစေရ။
သေသူ တဦးထဲအတွက် ဖွင့်ထားသော ခရက်ဒစ်ကတ်ကို အသုံးပြုခဲ့ရင်ဒေါ့ တရားမဝင်ဘူး။ ဥပမာ ပေးဗာဆို သေသူ၏ ခရက်ဒစ်ကတ် အချက်အလက်များဂို ခိုးယူပြီး အင်တာနက်မှာ ဈေးဝယ်ဂျင်း ဖြစ်ပါဒယ်။ ပိုသိမ်မွေ့ဒဲ့ ဥပမာပေးရမယ်ဆို သေသူရဲ့ ခရက်ဒစ်ကတ် ယူသုံးလို့ရနေတဲ့ ဇနီးခင်ပွန်း သားသမီးများဂ သူတို့နာမည် မပေါက်ဘဲနဲ့ ကတ်အသုံးပြုခြင်းလည်း ဆိုင်ဒယ်။
ခရက်ဒစ်ကတ် ဘရက်ဒ်ပစ်မှတ် ဇရပ်သစ်တက် သားမက်ခြစ်ဇာတ်
In addition to the pain and shock of losingaloved one, survivors must often deal with another unpleasant reality: debt collectors. Although collection agents may insinuate thatasurvivor is personally responsible for paying these debts, this is often not the case. That said, creditors are able to make claims against the deceased’s assets.
o A credit card essentially works likealoan. Each time it is used, the card company gives money toamerchant on behalf of the cardholder. In exchange, the cardholder is billed and charged interest on the amount borrowed.
If the card was issued only in the deceased’s name, then he is the only person obligated to the credit card company. Thus, family members are not responsible for the balance of any card for which they did not apply.
o If the deceased and his surviving spouse applied for any credit cards jointly, the surviving spouse is still liable for the balance of those joint accounts. However, beingajoint account holder should not be confused with being an authorized user on one of the deceased’s individual accounts. In the latter case, the spouse had no part in the application process. Rather, the agreement was only between the deceased and the lender; he simply chose to give his spouse access to his personal line of credit.
3. The Deceased’s Estate
o Immediately upon death, ownership of one’s assets are temporarily transferred toalegal entity known as his estate. The deceased’s creditors are then allowed to file claims against the assets held by his estate.
State law assigns creditors priority based on the nature of their claims. In general, burial and funeral costs get paid first, followed by medical bills related to final illness, followed by probate fees and any death taxes. Next, unsecured debt such as credit card balances are paid with any remaining assets in the estate. If assets still remain after the unsecured debt is paid, they are then distributed to the heirs and beneficiaries according to the deceased’s will.
4. Insolvent Estate
o If the estate doesn’t have sufficient assets to cover the deceased’s credit card debt, then the remaining balance simply goes unpaid. The credit card company is not allowed to sue surviving family members for additional funds.
· It is illegal to useacredit card for which the deceased is the sole account holder. A clear example of this would be an identity thief stealing the deceased’s credit card information and using it to make online purchases. A more subtle example would be authorized users such as the deceased’s spouse and children making charges on the card even though their names were not on the account.
Read more: http://www.ehow.com/about_7452736_pays-deceased-credit-card-debt_.html#ixzz2gzI41FKS
ဒီမှာတော့ ခရက်ဒစ်ကတ်တွေက ဘဏ်ကငွေအပြင် ပိုသုံးမရ၀ူးလားလို့… :hee:
ကတ်ရှင် သေရင် ကျန်ဒဲ့ မိသားစုက ဆပ်စရာ မလိုဒေါ့ဘူးဆိုဒေါ့ …
အင်းး တစ်ညိုးဒေါ့ တစ်ညိုးဘဲဂျ …..
ဒက်ဒီကြောင် တေတွားယင် ကျုပ်ဂ ဆပ်စရာ လိုဘူးပေါ့နော် …
နို့ .. နေဘာအုံးးး
ကတ်ရှင် တေတွားရင် အဲ့ဒီထဲက မန်းနီးဒွေဂျဒေါ့ရော ….
ခုခေတ်က ကြွေးတင် ဘုရင် ဆပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ရှင်ဘုရင့်အကြွေး
ပြည်သူဆပ် ရမဲ့ ကိန်းဆိုက်နေတာဗျ ..ဦးလေးကြောင်ရ။
တော်တော်ဗဟုသုတများစေမယ့် စာတွေပါဗျ..။ ကျေးကျေးကြောင်ကြောင်ရေ..
ယူအက်စ်ရောက်ခါစသူတွေမှာ.. စကျုဝါးကဒ်ကိုသိပ်နားမလည်သမို့.. ထရက်ဒစ်ရာဇ၀င်မတည်ဆောက်နိုင်ပဲ.. နှစ်ကြာတတချို့ ၁၀နှစ်လောက်အချိန်ပုတ်သွားသူတွေရှိတယ်..
ယူအက်စ်ရောက်ရင်.. ကိုယ့်အတွက်.. အကြွေးရာဇ၀င်ရအောင် လျှောက်နိုင်ပြီဆိုတာနဲ့.. ပစ်လျှောက်သင့်ပါတယ်..။
အကြွေးရာဇ၀င်ဆိုတာက.. လူတိုင်းမှာ အကြွေးဘယ်လောက်ယူတတ်တယ်..။ ပြန်ဆပ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့.. မှတ်တမ်းပါ..။ ဒါကိုကြည့်ပြီး.. အမှတ်ပေးစနစ်ရှိပါတယ်..
အမှတ်ပေးစနစ်ရဲ့အမှတ်အနိမ့်အမြင့်နဲ့.. အ်ိမ်ဝယ်..ကားဝယ်..အခန်းငှား.. ကားငှား.. စတာတွေလုပ်နိုင်ကြောင်းရယ်ပါ…
မြန်မာပြည်မယ်.. အကြွေးကဒ်စနစ်သုံးမယ်ဆိုရင်.. ကျုပ်ရွာသူားများကို.. ကျုပ်သတ်မှတ်ထားတဲ့.. အကြွေးရာဇ၀င်လက်မှတ်ထုတ်ပေးပြီး.. အာမခံပေးနိုင်ကြောင်း.. ဒန့်တန်တန်…
အကြွေးတင် ဘုရင်ဆပ်။ ဘုရင်ကတော့ဘဏ်ကိုဆပ်ဘူး ကွ့ကိုယ် လဘော်ဂီးနီးပဲဝယ်စီးလိုက်တော့မယ်တဲ့။
ပေါက်သွားပြီး..ပေါက်သွားပြီ…ခရက်ဒစ်ကတ် အကြောင်း သဘောပေါက်သွားတာနော်..ဦးကြောင်ကြီးရေကျေးကျေးဗျာ
ဒီကတ်တွေ ဒီမှာ မသုံးသေးပေမင့်
ခွက်ဒစ်ကတ်ကို မိသားစု မျှသုံးပြီး
သွားလေသူကို ပုံချလိုက်တာ မဆိုးဘူး ပြောရမလားမသိ…
ဒီလို ဗဟုသုတရတာလေးတွေလည်း.. တင်ပြပေးတော့..
ကျွန်တော့် ဒေါ်ဖွားမေကြီး..ဦးကြောင်ကို လက်ဆောင်ပေးမယ်..။
ကြွေးတင် ကြောင်ဘုရင်ဆပ်လို့ ဖတ်မိလိုက်တယ်။
credit historyရှိမှ ကောင်းတယ်ဆိုပြီး အကြွေးရတိုင်းဝယ်တတ်တဲ့ ဒို့ဘားမန်းတွေနဲ့တော့ ဒီစနစ်ကိုက်ပါ့မလား စဉ်းစားစရာပဲ။
အခုတောင် သမက ၀ိုင်းကြီးချုပ်နဲ့ ချေးငွေတွေ ထုတ်ပေးနေတာ တာဝန်ခံ တစ်ယောက် စာရင်းကွာတာ သတင်းထဲပါလာတယ်။
ချေးငွေယူသူတွေတော့ ဘာသတင်းထပ်ကြားရမလဲ စောင့်ကြည့်ဆဲ။
(ကြောင်ကြီးဆိုမှ ကြောင်လတ်တို့ ကြောင်လေးတို့ ကြောင်မျိုးနွယ်တွေ ပျောက်နေတာ အေကန်ဒ ကြောင်ကြီးများ ကြောင်စုန်းဖြစ်နေလို့လား)
ဆရာကြောင်ကြီးပြောမှပဲ ခရက်ဒစ်ကဒ်အကြောင်း သေသေချာချာ သိလိုက်ရတယ်။
ဒီမှာတော့ AWB ခေတ်က ခရက်ဒစ်ကဒ် သုံးဖူးတာကလွဲပြီး ဘာမှမသိဘူး။
ခုဒီမှာ သုံးနေတာကလည်း ခရက်ဒစ်ကဒ် ခေါ်ရမလား၊ ဒက်ဘစ်ကဒ် ခေါ်ရမလား ……. :rolleyes: